Hagaaji qaladka: cilad raadinta astaanta: /usr/lib/libgtk-x11.2.0.so.0 gudaha Archlinux | Laga soo bilaabo Linux
Kaliya waxaan sameeyay rakibid cusub oo ah Archlinux iyo kadib markaan dhameeyay, markaan isku dayay inaan galo Xfce Shaashadayda oo dhami way madoobi lahayd, asalka ayaa bilaaban lahaa inuu dhalaalmo oo aysan waxba soo rarin.
Markaan fiirinayo qormada waxaan ogaaday inay igu tuurtay qaladkan:
Marka waxaan bilaabay cilmi baaris ilaa aan xal u helay.
Aaway dhibaatadii? Markii aan dhammeeyey rakibidda ayaan cusbooneysiiyay nidaamka waxayna ila muuqatay in wax waliba caadi yihiin, hase yeeshe, sidaas ma ahayn. Xaqiiqdii ma aysan cusbooneysiinin xirmooyinka nidaamka saldhigga aniga. Sababta Maxaa yeelay fayl ayaa ku jiray /etc/profile.d/ loo yaqaan degaanka.sh taas oo isku dhacaysay oo aan u oggolaanayn baakadaha cusboonaysiinta.
Faylkani wuxuu ka koobnaa waxyaabaha soo socda:
Marka xaqiiqda, waa inay ku jirtaa waxyaabo kale. Sikastaba, waxa aan sameeyay ayaa ahaa tirtirka faylka la yiri:
oo dib u cusbooneysii nidaamka:
Dib ayaan u bilaabay hadana wax walbo caadi ayey ku soo noqdeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Hagaaji qaladka: Cilad raadinta astaanta: /usr/lib/libgtk-x11.2.0.so.0 gudaha Archlinux
Ma guuraynaa ??? ma aadan la socon Debian ???? ama kuwa kale ay horey kuugu qanciyeen inaad isticmaasho KISS ...
Hahaha taasi waa iska caadi aniga. Maanta waxaad igu arki doontaan Arch, berri markale Debian .. Wadarta, maadaama aanan haysan PC go'an .. Midka shaqada ayaan u qaadaa si tijaabo ah, hadana waxaan hayaa bakhaarro maxalli ah ..
Wanaagsan ...... halka aysan mid aheyn, waxna kuma xirna hahahahahaha
Waan kaa qarin doonaa dhamaan CD-yada Debian iyo Mint, waxaan kaa masixi doonaa dhamaan ISO-yada kuwan kale ee distoorrada ah si aan u arko haddii sidan aad ku joogto Arch HAHA
Tag qaladkaas waa wax aad u badan marka la cusbooneysiinayo qoraalada, markii la isku dayayo in si caadi ah loo cusbooneysiiyo ma istaagto, waxaana la joogaa waqtigii la sameyn lahaa rm-ka, waxaan u maleynayaa inuu jiro fayl kale oo isna sidan oo kale u hela marka la cusbooneysiinayo hadda si fiican uma xasuusto.
Khaladkaasi in muddo ah ayuu jiray.
Kaliya markaan ku rakibo mashiinada kale, imika iima siinayo qaladkaas. Iyo haa, nidaamka ayaa ku ogeysiiyey markaad cusbooneysiineyso ama aad rakibineyso qaladkaas.
Haha kii yidhi haa Arch in hadii foori iyo biibiile durba ku sugan tahay Arch markale haha ​​waxay umuuqataa inuu badalay hormoonkii odayga
Qof walba inuu caayo Qashinka wuxuu bil ku leeyahay Winbug.
Waxaan u maleynayaa in dhowaan ay i siin doonaan kumbuyuutar aan rido Arch si aadan kubadaha u taaban
Hahaha. Ugudambeyntii waxaan qabaa inuu jeclaaday Winbug ..
Waan isticmaali karaa Arch, Debian iyo xitaa Ubuntu ... Laakiin Windows? Ni amarrao .. Waxaan door bidaa inaan socdo sida ay aheyd in kabadan 5 bilood KZKGGaara, oo wata xasuusta USB-ga oo Ubuntu kujirto si joogto ah.
Fuck fiiri, waad culus tahay
Dameerku bakaylaha ugu yeerayo dheg weyn.
Waa run, waad ogtahay inaysan sidan noqon doonin nolosha, ugu yaraan waxay horeyba i siiyeen kumbuyuutarka, waan arki doonaa sida loo rakibo ATI waxaana aadayaa Arch
Markaad la socoto Firefox 9 dhibaato kuma qabtid xusuusta?
Waxaan dhammeeyey rakibida Arch oo ay la socoto XFCE, waxay igu kacday shaqo yar iyo waqti badan, shaqadu waxay ahayd dhibaato la mid ah taada laakiin kadib markii aan rakibey nidaamka aasaasiga markii aan cusbooneysiinayey waxaan helay /etc/profile.d/locale.sh khilaaf, laakiin doonaya inaan tirtiro, waxay igu soo celisay in faylkaasi uusan jirin, madasha ay igu caawiyeen iyagoo ii soo jeediyay inaan isticmaalo Syuf sidaasna aan ku xaliyay, maadaama waqtiga ay igu qaadatay ay ahayd dhibaato xaga internetka ah. Waxaan sidoo kale qorsheynayaa inaan isku dayo oo haddii aysan ila helin waxaan ku laabanayaa Debian. Waan ku qanacsanahay waayo-aragnimada inta lagu jiro rakibidda.
Waan ku qanacsanahay waayo-aragnimada inta lagu jiro rakibidda.
Haddaan wax u nidhaahno wax haha
Haddii la hubiyo http://www.archlinux.org/ Wararkii ugu dambeeyay waxaad arki kartaa goorta cusboonaysiinta xirmada ay u baahan tahay faragelin gacan qabasho ah.
Su'aashu waxay tahay, kadib markaan aqriyay xiriiriyeyaasha la soo jeediyay, ma aanan isticmaalin nidaamkii saxda ahaa, feylku wali wuu ku jiraa meeshiisii, dhibaatooyin dambe ayaa soo bixi doona, sidaa darteed miyaan dib u raadsadaa raaca talooyinka ama miyaan sii wadaayaa sidii aan u isticmaali jiray?
Tani waa waxa ay soo celiso:
# pacman -Rns qoraallada
# pacman -S qoraallada
Waxaan rajeynayaa inaadan wali sameyn, ma aanan xusin inaad u baahan tahay inaad dib u qaabeeyaan /etc/rc.conf iyo / iwm / inittab
Waad ku ogtahay /etc/rc.conf luuqada, kiiboodhka waqtiga maxaliga ah, modules hadaad haysato, magaca martida, interfaceka iyo daemons.
iyo / iwm / inittab beddel runlevel ka 3 illaa 5 iyo haddii aad isticmaasho maamulaha galitaanka awood.
Waa hagaag hawsha loo qabtay sidii lagu taliyay, wax walbana si caadi ah ayey u shaqeeyaan, waad ku mahadsan tahay kaalmadaada qiimaha badan waxaanan rajaynayaa inaad ka cudur daaraneyso dhibka keenay.
😀 Hadaad i dhibto, kuuma jawaabi doono.
Aad baad ugu mahadsantahay qoraalkaaga, waxay iga caawisay xalinta dhibaatada.
Waad soo dhaweyneysaa saaxiib soo dhowow 😉
Waad salaaman tahay, dib u soo nooleynta boostada, waxaan helay qaladkan isku dubaridka barnaamijka, laakiin ma haysto wax feyl ah oo la mid ah midka tusaalaha uu dhigayo waddada /etc/profile.d, kuwa muuqda waa bash_completion.sh iyo vte.sh
khaladku waa kan markaan rabo inaan furo barnaamijka isku duba rida khaladaad la'aan.
geany: qaladka raadinta astaanta: /usr/lib/i386-linux-gnu/libgio-2.0.so.0: astaan ​​aan la qeexin: g_signal_accumulator_first_wins
Gacan kasta ??, mahadsanid iyo salaan.
Ku jawaab l34
Sida Loogu ilaaliyo GRUB lambarka sirta ah (Linux)